जगेडा प्रधानमन्त्री - परिहास - नेपाल
प्रधानमन्त्रीचाहिँ देशमा दुइटै चाहिने रहेछ । हुन त, प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीले मजाक मात्रै गर्नुभएको थियो दुइटा प्रधानमन्त्री राख्ने भनेर । तर उहाँले मजाक मात्रै गरेको भए पनि देशका लागि प्रधानमन्त्रीचाहिँ दुइटा नै चाहिने देखिएको छ । गाडी होस् वा ठेला, जहाँ पनि एउटा जगेडा चक्का राख्ने चलन छ । जाबो गाडी त जगेडा नराखी चलाइँदैन भने सरकारजस्तो कुरा जगेडा प्रधानमन्त्री नराखी चलाउन मिल्छ ?
प्रधानमन्त्रीले ठट्टामा भन्नुभएको भए पनि यो कुराचाहिँ गम्भीर हो । उसो त, सबैलाई थाहा छ, हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू गम्भीर–गम्भीर कुरालाई पनि ठट्टामा उडाइदिनुहुन्छ । उहाँ ठट्टामा गम्भीर कुरा र गम्भीर कुरामा ठट्टा गर्न माहिर जो हुनुहुन्छ ।
यो पनि यस्तै हो । भनिएको ठट्टामै हो तर यथार्थमा देशको आवश्यकताले पनि दुइटा नै प्रधानमन्त्री माग गरिरहेको छ । एउटा मात्र प्रधानमन्त्रीले अब यो देश चलाउन सकिएलाजस्तो छैन । प्रधानमन्त्री दुइटा नै चाहिन्छ । एउटा प्रधानमन्त्री ‘समृद्ध नेपाल’ बनाउन, अर्कोचाहिँ ‘सुखी नेपाली’ बनाउन । एउटै प्रधानमन्त्रीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली दुवै बनाउन सक्ने देखिएन ।
त्यसमाथि अहिलेको सरकार त दुई तिहाइको हो । यसको रफ्तार भनेको जेट विमानको जस्तो हुनुपर्छ । जेट विमान दुइटै पाइलटले चलाउँछ । एउटा मात्र पाइलटले चलाउने त बयल गाडा हो । तर यो त बयल गाडाको सरकार होइन । यदि यो बयल गाडा सरकार होइन भने यसका लागि पाइलट त दुइटै चाहिन्छ ।
पहिले–पहिले सरकार चल्ने भनेकै नौ महिना, दस महिना हो । त्यसका लागि एउटै प्रधानमन्त्री पनि बढी थियो । तर अहिलेको सरकार त पूरा पाँच वर्ष चल्नेवाला छ । एउटै प्रधानमन्त्रीले कसरी पाँच–पाँच वर्ष सरकार चलाउन सक्छ ? ट्रक चलाउँदा त छोटो रुटमा हो भने एउटै ड्राइभर भए पुग्छ, लामो रुटमा हो भने दुइटा ड्राइभर राख्नुपर्ने नियम छ । लामो समयसम्म ट्रक चलाउन त दुइटा ड्राइभर राख्नुपर्छ भने सरकार चलाउन दुइटा प्रधानमन्त्री राख्नुपरेन ?